Mai Chibwe VekwaZimuto: Zemo remuhotera
Veduweeka, kana mune nguva yokumbobva pama nomurume moenda kumwe kure nemusha sokuti mobhuka pa hotera mondovatapo mazuva kana maviri chaiwo muchaona kuti zvinoitikapo zvakasiyana nezvinge zvichizoitika dai muri kumba. Kuvata muhotera kunowedzera zemo renyu mese murume nomukadzi asi ndinoona sokuti mukadzi anopfuura murume pakuwedzera zemo kana musiri pama.
Nyya dzinoitika pama dzinoderedza zemo remunhukadzi dzakawanda, zvikuru kana mune vana. Kana muri vaviri mukadzi anongofunga nyaya dzaokuriritira murume wake. Kuzvivunza kuti ndobikei, Ndosuka ndiro riini? Ndotsvaira muma here? Ndowaridza mubhedha here. Napo napo kubikira murume tii. Kuwacha, kuaina,
Zvese izvi zvinotora fungwa kudzibvisa pane zvokunakidzwa. Pamwe tinoona kuti murume wako anoita sokuti ane zemo rakawanda kukupfuura anongoda kuvata newe pese pese asi iwe usina fungwa nazvo. Hakusi kuti varume vanoda rhoji kupfuura vakadzi bodo. Isu tisi tinotoda chose kuvapfuura. mukadzi ane murume hazviiti kuti asafunga nyaya yokurhojewa nomurume wake, zvichibva pakuziva kuti murume haafaniri kugara ane unga mumabhora ake. Mukadzi wese ane murume anoziva kuti kutapudza unga hwemurume kunoisa FOCUS pamurume kuti agarofunga mukadzi wake, uye kuti asanetseka kumisa chombo. Iko kurhojewawo kuchinaka chose kumukadzi kana murume achihwisisa kukunonokera kana kutanga ambotamba newe.
Asi kana mukangogara pamba, zvikuru pamahoridhei amusingaendi kubasa, uchaona kuti mukadzi pamwe anoneta zvokusada kukwezva murume kuti atapudze unga pakurhojana.
Kana mukakwira mota yenyu mukaenda kuhotera iri kure nomusha, fungwa inoti hapana anokuzivai ikoko hino unhubu hwopinda mufungwa munhu oda kuita zvaasingasiiti muri kumba. Koitazve nyaya yokuti kana muri kure hapana chokuswerofunga kuita saka munopedzesira mangova vaviri pachenyu musina chimwe chokuita fongwa yotanga kufunga zvokunakidzana. Mukadzi anosununguka nokuda kwekushaya mabasa emumba. Murumewo haana chokutama nacho saka anokwezveka zvakanaka opedzisira ava mufungwa iyoyo zvakare.
Varume pano vanouya vachokomburena kuti vakadzi vavo havadi kuwanza kuvhura makumbo. Kukomurena uku kunobva pakusahwisisa kuwanda kwakaita mabasa emumba. Zvikuru kana iye murume asingabatsiri mukadzi nezvamabasa. Tinoona kuti chero mukadzi akazongobvuma kuiswa kwacho, chikapa chinoita chishoma nokuda kwekuneta.
Saka kana mukanovata kuhotera, pane zvakawanda zvinoitikapo zvinosapoka kukwira kwezemo. Chokutanga ndechokuti munowedzera nyaya pauviri hwenyu. Zvinobva pakuti munoona zvinhu zvakawanda zvamusingasioni kana muri kumba, mobva maudzana zvamaona moita nyaya pazviri.
Kuita nyaya kunoita kuti mushamwaridzane sezvamaiita muchiri kunyengana. Zvorerusa hana pakutaura, kunyemwererana, kuseka mese, kuudzana zviri mufungwa. Munhukadzi wese anonyevenuka moyo kana achihwa murume wake achitauri zviri mufungwa dzake.
Pakunodya munonodya makagara patafura yenyu muri vaviri muchionekwa nevamwe. kunesu vanhukadzi kuratidza munhu wese kuti uyu ndiye murume wangu (TERRITORY) zvinopa manyawi. Pakudya ipapo munobvunzana zvamunoda kudya zvisinei kuti pane SELF SERVICE here. Munototi mutaurirane kuti modyei. Mukadziwo anoongorora zvokudya zvinodiwa nomurume wake kuti kana madzokera kumba agozvibika kana zvichibikika.
Kana mukambobuda muhotera manheru sokuti moda kuongorora zvakaita nharaunda yacho, uchaona kuti murume wako anokuchengera (PROTECTION) kuita sokuti uri mwanana, zvichibva nokuti muri kwamusinganatsoziva saka iye oita sa BODY GUARD wako. Pakuchengegwa apa unohwa tumanyawi twokuti paita rudo apa kubva kumurume wako. Unoona kuti pakufama paya unomubata ruoko asi womurega achifamba mberi zvishomanana kuti atungamire kwamuri kuenda. Iko kubatana maoko kwacho kunowedzera fungwa dzezemo.
Madzoka murhumu yenyu uchaona kuti munokasira kundovata asi fungwa isiri pahope. Uchaona kuti une zemo rakawanda kupfuura zvokumba. Munowedzera kutamba mese, Ukada kuemera murume asi womunonotsa kumupinza pamakumbo. Ndiyo nguva yokumudzidzisa kutamba
Iwe wega unongohwa kuti zvakawedzera zvokuda rhoji naye. Mahotera akawanda ane shawa Endai mugeze mese asi iwe gezesa murume wako muviri wese , womupopomesa sipo womukwizirira musana. Wasvika pamagaro wedzera sipo umugezesepo. Magaro evarume akangofanana needu pakuitisa zemo nokuatwa. Gezesa murume wako magaro ake nesipo yakawanga, womupatsanura makumo womugezesa pakati pemagaro. Uchaona kuti haanonoki kumira chombo.
Kana asina kuchekwa, funyungura ganda rechomo umugezese nesipo. Uku shawa iri kudiridza uku uri kuita nyaya naye uku chombo chimire uku uri kuchigezesa. Wega iwe unongohwa muviri wako kuti wazara zemo. Mvira yeshawa iya kusvika kwayo paganda rako kunoitisa zemo futi. Minyatso inotomira yega pasina amboibata. Pota uchitarisa murume mumaziso muchitaurirana nemaziso asi iwe usanyarara kutaura nomuromo. Ramba uchita nyaya. Nokuti une chombo mumaoko usakangamwa kutaura nezvacho. Taura zvinoratidza kuti unofarira zvauri kuita uye zvakaita chombo.
Unokwanisa kutombotaura nacho chomo chacho. "Ko inga manatsomuka nhai Ngara. regai tikugezesei. " uri kutaura nechomo wosimudza musoro wotarisa murume womuudza kuti kuti "nhasi Ngara vane hasha. Kwakanaka here? " Anoseka hake asi anonyevenuka moyo nokuziva kuti unofarira chombo.
Kana achida kukugezesa rega akugezese. Muvhurire makumo akugezese pamberi. Muudze zvokuita aite. Minyatso hairegi kumira achidaro. Kana uchida kuti aite nguva aripo muudze zvokuita. sokuti atsvake bhinzi, Kana uchida kuti ambomwa zamu muudze amwe, uku mvura iri kunaya uku ari kukugezesa pamberi achitsvaka bhinzi.
Pamunozopedza mukapukutana, mega munongoziva zvokita . Muhotera hamunha mamwe ma RHUMU okuti munoenda. Mubhedha wenyu nezvese zvamunazvo zviri pamwe chete. Kungobuda mushawa muchitonogara pamubhedha. Ramba uchiita nyaya naye. Kwezva murume wako azive kuti unoda kuiswa. Sveta minyatso yake nokupurudzira chombo
Pamunozotanga basa revakuru, wega unozvionera pamhuno sefodya. Uchaonazve kuti kunaka kwacho kwakasiyana nokunaka kwerjoji muri kumba. Uchaonazve kuti mukabatwa nehope mapedza, muchamukirana futi usiku mugoisanazve.
Uchaonazve kuti zvimwe zvinhu zvasingachidi kuita nomurume wako, kana muri kure nomusha unoda kuzviita, iri ngari yokuti unhubu kana muri kure hunowanda. Unoita SENSE OF ADVENTURE. Sokuti kana uri munhu asingagoroda kusveta murume chombo, uchaona kuti akakukurudzira hauoni zvichityisa sezvazvinoita muri kumba. Iyewo ukamukumbira chimwe chaunoda anokupa.
Ratidza chose kuti zverhoj chete chete unozvida asi kungoti kumba mabasa akawanda okuita saka unoshaya sima razvo. Kana ukapepuka murume avete, usamumutsa kuti muvatane, Tanga wamupurudzira chomo kusvika chamira avete wozomumutsa kana kuti uchikwanisa kuchipinza avete pinza azomuka ava mukati mako.
Nguva yokuhotera haiuyi mazuva ese ndiko ine EXCITEMENT yakawanda. Musi wekutanga uchaona kuti unonakirana nomurume wako chose. Mazova kumba fungwa yako inongoona hotera senzvimbo yokunakirana saka umwe musi murume akazikuudza kuti abhuku hotera, wega unotanga kungofunga zvokurhojewa naye.
Varumewo zivai kuti kana pamba pakaita nyaya yausingakwanisi kugadzirisa zvine musoro. Tora mukadzi wako uende naye kukahotera kari kure. Moita weekend muriko. FRIDAY usataura nezvenyaya yenyu.isa fungwa pakuratidza mukadzi wako kuti haana kuvinga sadza nokupopota chete asi pane zvaanofanira kuziva kuti hazviwanikwi kumusha kwavo. Womufadza chose womutaudza nyaya dzakawanda, womuratidza kuti ndiye kwini wako. SATURDAY swerai muchifamafama mu FRESH air asi pota uchiporomisa kumupfidzisazve manheru. Manheru acho chitangai nezvomufaro wozoti aguta wochimuudza kuti unomuda chose uye uchamuda kusvika wafa ndosaka uchikumbirawo kuti achinje maonere aari kuita nyaya yokuti neyokuti.
Kana mukataurirana, mukapedza ratidza kuti anokufadza. Rhojana naye mupedzerane. Mumukire usiku upamhidze makuseni futi. Uchaona kuti haakangamwi nguva inofadza seiyi. Musi wamunotukana akakutsamwira muyeuchidze chitsidzo cherudo chawakamuudza muri kuhotera.
Muchato wese wese unoda kuti muite nguva dzamunoti mukayeuchidzana nezvakaitikako munohwa mufaro. Mukadzi akatiza akaenda kuvabereki vake unotaura naye pafoni nenguva dzakadai uchimuyeuchidza rudo.
Ko kana usina mari yehotera?
Hotera dzine marudzi akawanda kunoti dze STAR imwe chete, koita dzembiri, dzenhatu, dzena, dzeshanu. Mari yacho yakasiyanawo. iwe tsvaka kune mari shoma. Kana uchimwa doro kana kuputa fodya, umborega kwevhiki mbiri uwane kamari kokubhuka hotera.
Kana musina mota, kwirai bhazi muende. Kwirai maKift muende. Chaunoda chete kuratidza mai vemba yako kuti pane nguva yaunokwanisa kuti ndeyavo vega pasina zvimwe zvinokangaidza nguva iyi.
Ukazviita kamwe chete pamakore maviri ega ega, uchaona kuti zvinoshanda, Vanhu vekuno kunyika dzakaita se EUROPE ne America vanohwisisa chose nyaya iyi. Vekwedu vanoihwisisa kana mukadzi wekuenda naye kuhotera ari hure raangosanganawo naro. Zokutora mai vemba zvishoma. Asi shuwa dzidzaiwo kutorana pachenyu. Monodzidzsna zvitsva zvamunoda kuitirana.
Pa Easter apa mwana akaenda kushamwari yake ku Wales isu ndokuenda ku musoro kwe Manchester uko mazuva mana. Bed and Breakfast kusingadhuri.zvinofadza.
Posted by Mai E Chibwe at 08:49
Mazano okuramba kuvata noumwe wako.
Murume anoramba mukadzi anoshanda